स्थानीय तहमा कर्मचारीको हाहाकार : Sajha Network - Nepal's No. 1 Online News Portal
स्थानीय तहमा कर्मचारीको हाहाकार
हुमाकान्त पोखरेल, गुल्मी मंसिर १८ ।
गुल्मीका स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव देखिएको छ । दरबन्धीअनुसार केन्द्रले कर्मचारी नपठाउदा स्थानीय तहलाई काममा समेत समस्या परेको छ । स्थानीय तहले सेवाग्राहिको कामलाई मध्यनजर गर्दै करारमा कर्मचारी नियुक्त गरेपनि ति पनि पर्याप्त छैनन् ।
कर्मचारी विहिन गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका
गुल्मीका स्थानीय तहमा तोकिएको दरबन्धीभन्दा आधापनि कर्मचारी छैनन् । नागरिकले स्थानीय सरकारमा सबै काम हुन्छन् भन्ने अपेक्षा गर्छन तर कर्मचारी नहुँदा भने निराशा पैदा हुने गरेको छ ।
गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिकाको कुल दरबन्धी सङ्ख्या ३४ हो । जसमध्ये प्रशासनमा मात्रै आठ कर्मचारीको दरबन्धी केन्द्रले तोकेको छ । तर त्यहाँ एकजना मात्रै कर्मचारी केन्द्रले पठाएको छ ।
गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत छन् । तर नायब सुब्बा कोहि छैनन् । जबकी गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत, अधिकृत स्तरको हुन्छ । यदि कारणबस प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत बिदामा बसे वा अनुपस्थित नभएमा नायब सुब्बा स्तरको कर्मचारीले काम गर्नुपर्ने ब्यवस्था छ ।
तर गाउँपालिकामा कोहि पनि नायब सुब्बास्तरका कर्मचारी नहुँदा बेलाबेलामा खरिदारको भरमा गाउँपालिका चल्नुपर्ने बाध्यता रहेको अध्यक्ष दोर्ण खत्रीले जानकारी दिए । त्यसका साथै उनले चन्द्रकोट गाउँपालिका ५ नम्बर प्रदेशमै कम कर्मचारी हुने गाउँपालिका रहेको समेत दाबी गरे ।
मुसिकोट नगरपालिकाको कुल दरबन्धी सङ्ख्या ४२ हो । तर अहिले १८ जनामात्रै दरबन्धीमा छन् । जुन कुल सङ्ख्याको .. प्रतिशत हो । नगरपालिकामा इन्जिनियर, ओभरसियर र सब–ओभरसियरको दरबन्धी छ । तर प्राविधिकतर्फ एकजना पनि कर्मचारी छैनन् ।
जसका कारण नगरपालिकाले करारमा कर्मचारी नियुक्त गरेर काम गरिरहेको छ । त्यसैगरि नगरपालिकामा कृषिमा दुईजना कर्मचारीको आवश्यकता पर्दछ । तर दरबन्धीमा एकजना पनि छैनन् । पशु चिकित्सक, स्वास्थ्य क्षेत्र र लेखा अधिकृतको पनि दरबन्धी छ । तर त्यो दरबन्धी कागजमै सिमित भएको छ ।
गाउँपालिका करारमै भएपनि कर्मचारी नियुक्ति गरेर काम गर्न बाध्य भएको नगरप्रमुख सोमनाथ सापकोटाले जानकारी दिए । छत्रकोट गाउँपालिकामा कार्यालय सहायकदेखि प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतसम्म २९ जना कर्मचारीको दरबन्धी छ । तर हाल ११ जनामात्र कार्यरत छन् । जुन कुल कर्मचारी दरबन्धी सङ्ख्याको ३७ प्रतिशत हो ।
गाउँपालिकामा अधिकृत स्तरको इन्जिनियरको ब्यवस्था छ । तर केन्द्रले नपठाएपछि करारमा नियुक्त गरिएको छ । त्यसैगरि अन्य दुईजना इन्जिनियर र कार्यालय सहयोगी दुई जना पनि करारमै नियुक्त भएका छन् ।
गाउँपालिकामा नायस सुब्बा स्तरको १५ कर्मचारीको दरबन्धी भएपनि ६ जनामात्र उपलब्ध छन् । त्यसैगरि प्र्राधिकतर्फ आठ कर्मचारीको दरबन्धी भएपनि करारमा एकजना नियुक्त गरेर गुजारा चलाएको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत मधुकृष्ण पौड्यालले जानकारी दिए ।
लेखा शाखामा पनि दुईवटाको दरबन्धी भएपनि एकजनाको पद रिक्त छ । त्यस्तै गाउँपालिकामा कृषि, प्रशासन लगायतका विभागमा कर्मचारीको अभाव देखिएको अधिकृत पौड्यालले बताए । मदाने गाउँपालिकामा पनि पाचँजना कर्मचारी करारमा नियुक्त भएका छन् ।
कम्युटर अपरेटर, ओभरसियर र कार्यालय सहयोगि करारमा छन् । भने दैनिक ज्यालादारीमा तिनजनाले काम गरिरहेको सुचना अधिकारी ऋषि पन्थीले जानकारी दिए । त्यस्तै रेसुङ्गा नगरपालिकामा नायब सुब्बा स्तरको कर्मचारीको अभाव भएको सुचना अधिकारी शंकर प्रसाद गौतमले बताए ।
धुर्कोट गाउँपालिकाको कुल कर्मचारी दरबन्धी सङ्ख्या ३१ हो । तर हाल २३ कर्मचारीले मात्र हाजिर गर्छन् । छ जनाको नायब सुब्बाको दरबन्धीमा दुईजनामात्र उपलब्ध छन् । बाँकि चार पद रिक्त छ । लेखापालमा कर्मचारी भएपनि सह–लेखापालको दरबन्धी खाली छ ।
दरबन्धीका प्राविधिक कर्मचारी एकजना पनि छैनन् । भने वडा नम्बर १ नयाँगाउँमा सचिवको पद रिक्त रहेको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत लोकहरी थापाले जानकारी दिए । काम गर्नको लागि गाउँपालिकाले करारमा आठजना कर्मचारी नियुक्त गरेको छ ।
जसमध्ये पाचँवटा वडामा एक-एकजना कार्यालय सहयोगी र गाउँपालिकामा तिनजना नियुक्त गरिएको थापाले जानकारी दिए । भने दुई वडासचिवलाई गाउँपालिकाको प्रशासन शाखाको पनि जिम्मेवारी दिइएको छ ।
स्थानीय तहमा विषयगत शाखाको छुट्टै कर्मचारीको ब्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार शिक्षातर्फको दुई आर.पि. को दरबन्धी छ । तर रुरुमा आर. पि. नै छैनन भने कृषि र भेटनरीको दरबन्धी नै कायम नगरिएको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत गिरीले जानकारी दिए ।
छ वडा वडामा चार सचिवले काम गरेका छन् । त्यस्तै चार वडामा एक÷एक जना कार्यालय सहायक करारमा नियुक्त गरिएको छ । थानापति, बलेटक्सार, रुरु र ग्वादीमा करारमा कर्मचारी नियुक्त गरिएको गिरीले जानकारी दिए ।
सत्यवती गाउँपालिकामा पनि पाचँजना नायब सुब्बाको पद रिक्त छ । तिनवटा वडामा सचिव नै छैनन । भने प्रत्येक वडामा इन्जिनियर नै नभएको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत यादव भण्डारीले जानकारी दिए । केन्द्रले आवश्यक कर्मचारी नपठाएपछि गाउँपालिकाले कुल २१ जना करारमा कर्मचारी नियुक्त गरेर गुजारा चलाएको छ ।
गाउँपालिकाको कार्यालयमा दुईजना इन्जिनियर, तिनजना कार्यालय सहयोगि, सबै वडामा कार्यालय सहायक करारमा नियुक्त गरिएको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत भण्डारीले जानकारी दिए ।
तर जिल्लाको सत्यवती गाउँपालिका अहिले विद्यालय निशिक्षकविहिन बन्न पुगेको छ । ‘लामो समयदेखि विद्यालय निरिक्षक र आर. पि. कोहि छैनन्, सासंददेखि मन्त्रीसम्म सबैको सोस् लागउदा पनि कर्मचारी आउन सकेनन् ।
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत यादव भण्डारीले भने, ‘सबैभन्दा धेरै असर शिक्षाको क्षेत्रमा देखा परेको छ । विद्यालय निरिक्षक नहुँदा सबै काम आफुले नै गर्नुपरेकोले अन्य सेवाग्राहीलाई सोचेजस्तो सेवा दिन नसकेको भण्डारीको भनाई छ । यदि अझै समय विद्यालय निरिक्षकको पद रिक्त रहे गाउँपालिकाको शैक्षिक गुणस्तर झन् खस्किदै जाने उनले बताए ।
जिल्लाको चन्द्रकोट गाउँपालिका कर्मचारी विनोद भट्टराईले चारवटा वडाको काम गर्छन् । उनलाई वडा नम्बर १, ४, ५ र ६ को काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सोहि गाउँपालिकाकै डिल बहादुर थापालाई पनि वडा नम्बर ७ र ८ को जिम्मवारी दिइएको छ ।
त्यत्तिमात्र होइन्, उनलाई गाउँपालिकाको प्रशासन शाखाको पनि जिम्मा लगाइएको छ । त्यस्तै मन्जु घिमिरेले वडा २ र ३ तथा गाउँपालिकाको राजस्व शाखा हेर्नुपर्ने बाध्यता रहेको गाउँप्रमुख दोर्ण खत्रीले बताए ।
छत्रकोट गाउँपालिकामा पनि पाचँजना कर्मचारीले दोहोरो जिम्मेवारी लिएका छन् । खरिदार हुमनाथ पन्तलाई गाउँपालिकाको प्रशासन र योजना शाखाको जिम्मेवारी तोकिएको छ । भुषण भुसाललाई सुचना प्रविधि अधिकृत र राजस्व शाखाको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
त्यस्तै प्रमोद भट्राईलाई कृषि र पशु शाखा, अशोक श्रेष्ठलाई वडा न. ४ र ६ तथा मेघलाल पाण्डेलाई वडा न. १ र २ मा सचिवको जिम्मा लगाइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
गाउँपालिकामा आवश्यक कर्मचारी नहुँदा ब्यवसाय दर्ता, योजनाको इष्टिमेट बनाउने, सचिवले दोहोरो जिम्वेवारी पाउँदा समयमै काम नहँुने जस्ता समस्या नागरिकले भोग्न बाध्य छन् ।
एउटै सचिवले धेरैतर्फको जिम्मेवार बहन गर्दा स्वभाविकै अर्कोतर्फको सेवाग्राहीलाई असर पुग्छ ।’ मालिका गाउँपालिकाका प्रवक्ता शोभाखर गिरीले भने, ‘अझैसम्म पनि नागरिकलाई गाउँगाउँमा सिहंदरबारको अनुभूति दिलाउन सकिरहेका छैनौ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन अगाडी जिल्लाका सबै स्थानीय तहका कर्मचारीको नेतृत्व प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्ने ब्यवस्था थियो । निर्वाचनपछि पनि केहि समय त्यो ब्यवस्था कायम राखियो ।
त्यसताका कर्मचारीसम्बन्धी कुनै गुनासो गर्नुपरे प्रमुख जिल्ला प्रशासनको ढोकामा पुगे हुन्थ्यो । एउटा प्रशासनले जम्मा १२ स्थानीय तहको कर्मचारी मिलान गर्दा केहि सहज गराउथ्यो पनि । तर अहिले त्यो अधिकार कटौति गरिएको छ ।
जसका कारण कर्मचारीको लागि स्थानीय तहले सिधै मन्त्रालयमा नै सम्पर्क गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘सुरुमा कर्मचारी पठाउने अधिकार थियो, तर अहिले त्यो अधिकार पनि कटौति गरिएको छ । गुल्मीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथ पौड्यालले भने, ‘कर्मचारी चाहिएमा स्थानीय तहले संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्नुपर्छ ।
स्थानीय तह तथा जिल्लाका अन्य सरकारी कार्यालयहरुमा पनि कर्मचारीको उचित ब्यवस्थापन नहुँदा संक्रमणकालको अवस्था सिर्जना भएको स्वयम् प्रजिअको भनाई छ ।
कर्मचारीको सम्बन्धमा हामि मन्त्रालयमा नै डेलिकेशन गएका छौँ, पठाउने आश्वासन आएको छ ।’ गाउँपालिका महासंघ ५ नम्बर प्रदेशका अध्यक्ष मधुकृष्ण पन्तले भने, ‘तर केन्द्रले अझै पठाएको छैन ।
लामो समयदेखि नै केन्द्रले आफूहरुलाई कर्मचारीको सम्बन्धमा झुलाउदै आएको उनले दुखेसो पोखे । यदि केन्द्रले समयमै कर्मचारी नपठाए स्थानीय तहले आफै करारमा भएपनि कर्मचारी नियुक्ति गरेर काम चलाउने क्रम नरोकिने उनले जानकारी दिए ।